IT လူငယ်များ: Computer,Pen Drive,Memory Card ထဲက မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်လိုချင်ကြရင်
ဒီလောက်တော့ရေးပြီးပြီ 09/09 - 09/16 09/02 - 09/09 08/26 - 09/02 08/19 - 08/26 08/12 - 08/19 08/05 - 08/12 07/29 - 08/05 07/22 - 07/29
အမေး - အဖြေ ကဏ္ဍ
IT လူငယ်များ. Powered by Blogger.
ပြီးရင်ဒီလို ပုံစံလေးတခု ထပ်ကျလာအုံးမှာပါ.ဒါဆိုရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ..Ok နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မှားဖျက်တာတွေ ကိုယ် save ခိုင်းထားတဲ့နေရာဆီ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်.... ဟုတ်ကဲ့..ပြောလို့ဝ သွားပါပြီ...ကျေဇူးတင်ပါတယ်..
ရေးသာသူ အေးအေးလင်း ရေးသာချိန် 12:51
Sithu Aung 8 April 2013 at 04:47
အထွေထွေကွန်ပျူတာနှင့် အင်တာနက်နည်းပညာFacebook Application မိမိရဲ့ အကောင့်ကိုလုံခြုံစေရန်အချက်(10)ချက် မျှဝေပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာယူနီကုဒ် ဘယ်လိုသုံးပျောက်နေတဲ့ VCD/DVD Driver ပြန်ဖော်မယ် မိမိကွန်ပြုတာသို့ မသမာနည်းဖြင့်ဝင်နိုင်သော ၀င်ပေါက်များFreeDownload ဆွဲရမယ်kaspersky key တွေကိုWindows7(64-bit)အတွင်း Alpha Zawgyi Uni-codeဖြင့် စာရိုက် မရသည့် ပြဿနာComputer Definition များBat Files သင်ခန်းစာ (၁) နောက်ထပ် Facebook အတု သတိပြု
IT လူငယ်များIT လူငယ်များ | Designed for http://youth-it-technican.blogspot.com/ - KoLin-Thalarwaddy, collegetextbookprice.com, youth-it-technican